Isitshayina inkcubeko, intlanganiso abazali a kubekho inkqubela rhoqo a uphawu ukuba ubudlelwane ngu ezinzima. Ividiyo Dating
wacinga kuwe kwakhona ekubeni coy malunga budlelwane kwaye alenze wena u-zi dating kwaye uthathe ukubona kwayo abazali njengoko yakhe fiancé. Oku kwimeko yesi-ngu highly engathndwayo ukuba sasivuya ukukholelwa ukuba kufuneka ngokucacileyo communicated abayo ukuba ngaba abakho dating, kwaye le ayiyo romanticcomment budlelwane, njengoko kwi esithi kwi-cacisa Isitshayina amazwi wakhe ubuso ukuba andikho dating kwenu, kwaye asiphinda kwi budlelwane, Ngenxa yakhe ekhaya town waba encinane kwisixeko (yi-small ndithetha hayi Beirut, i-shanghai, Guangzhou, i-chongqing), yena kakhulu kusenokwenzeka ukuba phantsi ezininzi koxinzelelo get watshata. Kwaye ukuba yena akubonakali t ufuna ukufumana kwi budlelwane kunjalo ngoku, yena abe sebenzisa yakho utyelelo appease yakhe abazali nagging. Yena kumenywa ukuba yakhe ekhaya ukunika kubo impression ukuba yena s dating umntu osuka phandle, mnandi decent mfana kunye enkulu yexesha elizayo. Ngoko ke, kuye abazali babe shiya yakhe yedwa kuba okomzuzwana. Yena akasoze ngasekunene ngaphandle kukuxelela ukuba yena usebenzisa ukuba umthetho njengoko boyfriend yakhe, ngubani owaziyo, nibe thabathani ezingachanekanga indlela kwaye ngokuqinisekileyo ufuna kuba budlelwane okanye ukufumana offended kuba ekubeni manipulated. (kodwa, nje nika kancinci isiqalo, hiring bafana ukuba enze njengoko zabo boyfriends kwi-phambili yabo abazali yiyo ngokwenene inkonzo wanikela kwi-China. Andiqinisekanga ukuba girls ngqo sebenzisa boyfriend kuba hire, kodwa ndiqinisekile abanye girls ukuxoka ebazalini babo malunga zabo indoda abahlobo ngoko ke abazali ingaba yima nagging nabo malunga yokufumana watshata), yena ufuna mema abahlobo bakhe kuye ekhaya, ukuba ufuna kwakhona mhlophe (okanye i-non-Isitshayina), yena mhlawumbi ufuna ukubonisa kuwe ngaphandle, njengoko okulungileyo umhlobo yena waba kwi-big isixeko, yena nje ufuna kubonisa elungileyo ixesha abayo usapho, mhlawumbi wakhe abazali bamele omkhulu cooks. Kunokwenzeka kakhulu elula umhlobo isidlo sasemini kunye nosapho kwaye akukho nto ngakumbi. Kwinkqubo yethu inkcubeko, thatha boyfriend girlfriend ukuhlangabezana zethu abazali kakhulu ezinzima nto. Oko kuthetha ukuba sifuna ukuqinisekisa ukuba abazali bethu unako ukwamkela kwakho umyeni wam umfazi. Ngoko ke, yakho girlfriend ngu ezinzima, kwaye yena uthando kuwe.
NCEDA. Yathetha kunye yakhe, zibalisa kwayo i-trues kwaye yima ukudlala ambiguous！ Ingaba yena ukumiselwa ukuba umama njengokuba boyfriend yakhe, okanye njengoko umhlobo? Ukuba yayo s owokuqala, ewe ukuba kusenokwenzeka ezinzima. Kodwa, kuba ngaba balingwe ecela yakhe? Abaya kunika umfuziselo oluthe ngqo impendulo kunokuba abanye bolunye uhlanga kwi-Vidiyo Dating. Ukususela inkcazelo yakho, kubaluleke kakhulu cacisa ukuba zombini kuni nje qala yakho kubudlelwane, oko kukuthi indlela kakhulu kamsinya kuba Isitshayina kubekho inkqubela ukuba entertain i-unye womtshato. Kanjalo, izinto zinako ukutshintsha e a staggering inyathelo nje kwi-China. Isidlo sasemini kunye abazali ngu-hayi ixesha elide a mpumelelo iyimbali kwi-budlelwane nabanye ngathi kuya kusetyenziswa kuba (mhlawumbi kwezinye ezisemaphandleni kodwa ngokuqinisekileyo hayi kwi-izixeko, ingakumbi kunye langaphandle boyfriend). Yintoni zibe kokuya kwi kwi kubekho inkqubela s intloko ngu ngokupheleleyo ukhuselwe Feiffer Wang ngoko ke ndizokwenza ezingayi phinda. Nangona kunjalo, ukuba uthatha icebiso lam ke kufuneka kukuxelela ngakumbi. Oko basenokuba awkward ukuba dine kunye nabantu abo musa t kuthetha yakho ulwimi. Ngoko ke, uza kubona kubekho inkqubela s abazali smiling basically lonke ixesha xa ethetha. Ukuthetha amava, nayo ayikwazi kuba eyona imbi sangokuhlwa ebomini bakho njalo.
Ndingumntu Isitshayina, ukuba yena sibuza ukuba ingaba i-sangokuhlwa e yakhe ekhaya abayo bobabini abazali, oko bekuya kuthetha yena ngu kokuqwalasela malunga marrying kuwe. Ukuba kunzima nje ekubeni isidlo sasemini kunye umama, mhlawumbi yinto nje umama ufuna ukubona loluphi uhlobo mntu unoxanduva kwaye akhusele wakhe nentombi ukusuka yokufumana kwenzakalisa. Nangona kunjalo, uninzi Isitshayina girls ingaba iselwa ezinzima malunga dating. Akuvumelekanga ukuba kulula buza kwabo ngaphandle. Kwaye xa yena bavumelana beka phantsi ngaphandle kunye nani kuba sangokuhlwa okanye ubukele ifilim kuba ngaphezu phinda-phinda, kubalulekile kakhulu kusenokwenzeka ukuba yena ngu ethabatha kuwe njengoko boyfriend yakhe.
Ukuba yakho girlfriend kumenywa ukuba ahlangane yakhe abazali, oko kuthetha ukuba yena ufuna ukuba angenise boyfriend yakhe kuye abazali formally kwaye naye kanjalo ufuna yakhe abazali kukunika dibanisa ingqwalasela. Kubalulekile kananjalo a uphawu ukuba ngaba kukho umntu yena ingaba uzimisele tshata kwixesha elizayo. Ukuba ufuna ukwakha ngakumbi ubudlelwane kunye yakhe, ndicebisa kufuneka azise ezinye izipho kuba yakhe abazali. Kulungile, ukuba usenama-hesitate malunga budlelwane, ndicebisa umxelele wakhe ukuba ihlala ingu na ixesha ukubona kwayo abazali
← Apho Kuhlangana Asian Ladies kwi-Intanethi - Ulwazi Barrel
Abavela kumazwe angaphandle amadoda share iincam kwi njani woo umbutho woomama kwi-China - Global phinda-Phinda →